Imibuzo Evame Ukubuzwa - Yangzhou JNP Co., Ltd.
Siyaqaphela ukuthi ezinye izinkinga zizovela uma uthenga ku-inthanethi.Ukwenza kube lula, hlola i-FAQ ngezansi.Lena imibuzo evame ukubuzwa.Uma ungayitholi impendulo, vele ugcwalise okuthi "Contact Us" futhi othile uzoxhumana nawe ngqo.
Ingabe amabhuzu e-Sheepskin azonwebeka?
Amabhuzu ethu ezimvu azokwelula ngokwemvelo ngokugqoka.Ukuba umkhiqizo wemvelo, isikhumba sezimvu sizonikeza kancane, ngakho-ke uma uthenga amabhuzu adinga ukuhambisana ne-snug, kodwa namanje ukhululekile.Uma ungaqiniseki ngosayizi wakho, sicela usithumele i-imeyili kuamanda@jnpfootwear.com
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokunakekela amabhuzu ami Esikhumba Semvu?
Uma zingcolile, ziyeke zome bese uzixubha.Kungcono ukuthi ungawashi amabhuzu akho noma uwafake emshinini wokuwasha.
Ingabe ama-Fluffy Slippers angenziwa ngezifiso ngezinto ezahlukene?
Ama-Fluffy Slippers ahlukene ayatholakala ukuze ukhethe, futhi izinto ezihlukahlukene zingenziwa ngendlela oyifisayo, njengokuthi: Isikhumba Semvu, Uboya Bomvundla Obulingiswa, Uboya Bomvundla Obufushane njll.Ufuna ukwenza ngokwezifiso ezinye izinto, sicela usithumele i-imeyili ku-amanda@jnpfootwear.com
Yamukela ukwenza ngendlela oyifisayo?
yebo, yamukela ukwenza ngokwezifiso, ungenza ngokwezifiso ilogo yakho, impahla/umbala/usayizi ungenziwa ngokwezifiso
Ngingaxhumana kanjani nesevisi yamakhasimende?
Ungasithola lapha noma usithumele i-imeyili:amanda@jnpfootwear.com
Ngizozwa ngokushesha kangakanani nge-JNP?
Sizokuphendula emahoreni angu-6, Bamba uqinise, sizoqinisekisa ukuthi sibuyela kuwe ngokushesha.
Isampula yinde kangakanani?Ingakanani i-oda lenqwaba?
Isampula lezinsuku zokusebenza ezi-3-7, i-oda lenqwaba lingaba yizinsuku ezingama-30 (Ngokwenani lakho)
Ngililandelela kanjani iphakheji lami?
Ngemuva kokuthi i-oda lakho selithunyelwe, umdayisi wethu uzokuthumela i-imeyili enesithombe sakho somkhiqizo kanye nenombolo yokulandelela.Ungayisebenzisa ukulandelela izinto zakho kuze kufike emnyango wakho.